Ndị ọzọ kachasị mma nke 8 maka AirTags maka gam akporo | Gam akporosis
Ignacio Sala | 15/07/2021 22:00 | Ngwaọrụ ndị ọzọ
Usoro usoro abụghị ihe ọhụrụ, n'eziokwu, ha anọwo na ahịa ruo ọtụtụ afọ ọ bụ ezie na ha nwere ọrụ dị iche ebe ọ bụ na ha jikọtara na kaadị SIM, ndị ụlọ ọrụ na-ejikarị ya eme ihe maka njikwa nke ugbo ala.
Otú ọ dị, site na mwepụta nke AirTags, ihe mgbaàmà nke na-enye anyị ohere ịchọta ihe ọ bụla ma n'ụlọ ma ọ bụrụ na anyị efunahụ ya n'ụlọ, o yiri ka Apple emegharịrị wiil ahụ, mgbe ọ bụghị n'ezie. N'ezie, AirTags ha bụ ndị ikpeazụ kụrụ n’ahịa.
Ọnwa ole na ole tupu ngosipụta nke AirTags, Samsung webatara Galaxy SmartTags. Ogologo oge tupu nke ahụ, ụlọ ọrụ Tile ahụ bidoro mgbama ọnọdụ nke bụ n'ezie mgbanwe nke ụdị ngwaọrụ a. Ma, ọ bụghị naanị ha. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe kasị mma uzo ozo ka Apple AirTags na-arụ ọrụ na android, M òkù ka ị nọgide na-agụ.
1.1 Ihe eji eme ihe
1.2 Ngidi Pro
3 Nkebi ONE
5 Filo Kpido
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka Tile, anyị ga-ekwu maka ya ụlọ ọrụ izizi bidoro mgbama ọnọdụ. Mgbama ndị a na-eji ndị ọrụ ntanetị nke aka ha ịchọta ihe ndị funahụrụ anyị, anyị efunahụla, ha ezuru anyị ...
Site na ngwa gam akporo, anyị nwere ike ime ka ngwaọrụ ahụ daa ma ọ bụrụ na ọ dị nso ma ọ bụ chọta ya na map ma ọ bụrụ na ọ tere aka, ha niile n'efu ma na-akwụghị ụgwọ maka ndenye aha.
Developer: Na Na Na Inc.
Ngidi na-etinye anyị Modelsdị 4 dị iche iche, ụdị na anyị zuru ezu n'okpuru:
Njirimara Sile Scerk na ntụgharị ihu na a nrapado nke na-enye anyị ohere idozi mgbama ahụ na ngwaọrụ ọ bụla ma jiri ngwa ahụ iji chọta ngwaọrụ mgbe anya kwụsịrị. Ọ dị mma ịchọta njikwa ntanetị maka TV mgbe ị na-aga njem site na sofa, kamera, igodo ụlọ, mbadamba ...
Nwere a 36mm iru batrị ahụ dị afọ 2, enweghị mmiri, ọ bụ naanị na oji, dị ọnụ na 39,99 euro na mkpọ nke 2 nkeji ma ọ bụ euro 64,99 na mkpọ 4 nkeji. Ọ dị 27 mm x 7,3 mm ma nwee obere ọkà okwu nke ga-ewepụta ụda ga-enyere anyị aka ịchọta ihe ndị furu efu.
Ngidi Pro incorporates a ikedo iji mee ka igodo ya, akpa azu ya na ihe ndi ozo anyi choro ida. Nke a bụ ụdị nke nwere ụdị bluetooth kachasị ogologo na ruo 122 mita.
Ọ na - agụnye ọkà okwu nke na - ewepụta dB dị elu karịa ụdị ndị ọzọ nke Tiles na - enye, batrị a na - edochi ga-adịru afọ 1, mmiri na - enweghị mmiri (ọ bụghị mmiri mmiri) ma nwee ogo 42x42x6,5mm. Ihe nlereanya a dị na agba nwa, ọcha, pink, acha anụnụ anụnụ na ọbara ọbara.
Pricegwọ nke 1 Ngidi Pro bụ euro 34,99, ngwugwu nke 2 Tile Pro bụ 59,99 euro mgbe mkpọ nke 4 na-aga 99,99 euro.
Na Ngidi ebughibu e mere na- jiri ya na warara ebe, dị ka n'ime obere akpa, na onu, na mkpado akpa. Ọ dị na agba nwa, pink, miri-acha anụnụ anụnụ na-acha uhie uhie, nwere nso nke mita 61.
Ọ na - agụnye ọkà okwu site na nke a na - eme ụda ahụ nke ga - enyere anyị aka ịchọta ihe ejikọtara ya (ọ na - abụkarị obere akpa ma ọ bụ akpa), the batrị na-enweghị ike ịgbanwe ga-adịru afọ atọ, ọ bụ mmiri na-enweghị mmiri ma nwee ogo nke 86x54x2,4 mm.
Pricegwọ ya bụ 29,99 euro maka otu mgbe mkpọ nke 2 nkeji bụ 59,98 euro.
The Tile Mate na-enye anyị imewe Yiri nnọọ ka Tile Pro nwere oghere iji jikọta na ihe ndị anyị na-achọ ịchịkwa mgbe niile, mana ya na ọkara igwe Bluetooth: 61 mita.
Ọ na - agbakwunye ọkà okwu site na nke ọ na --emepụta ụda nke ga - eme ka anyị nwee ike ịchọta ihe a metụtara na ya, ndị batrị ga-edochi ma nwee ogologo oge nke afọ 1, enweghị mmiri ma nwee nha 35x35x6,2 mm.
A na-akwụnye ọnụahịa Tile 24,99 euro. Mpempe akwụkwọ mpịakọta abụọ bụ euro 47,99 na ngwugwu 4 ga-aga 69,99 euro. Ọ dị naanị na ọcha.
Ọnụahịa niile egosiri maka akara ngosi Tile kwekọrọ na weebụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ zoputa anyi euro ole na ole, kacha mma anyị nwere ike ime bụ ịzụta ha ozugbo na Amazon site njikọ a.
Galaxy SmartTag bụ ihe ọzọ dị iche iche na AirTag ebe ọ bụ na mgbakwunye na ịrụ ọrụ dị ka onye na-enyocha ihe, itinye bọtịnụ Na nke anyị nwere ike rụọ ọrụ ndị ọzọ smart home ngwaọrụ ime omume dị ka imeghe ụgbọala ụzọ, ịgbanyụ ọkụ niile dị n'ụlọ, rụọ ọrụ ma ọ bụ deactivating mkpu ...
Na usoro nke imewe, nke a bụ nnọọ yiri na nke ezumike mgbama ndị ọzọ na anyị nwere ike ịchọta n'ahịa, nwere oghere n'akụkụ elu iji jide ya. Banyere nha, ọ dịkwa nnọọ ka azịza ndị ọzọ dị n'ahịa (39x10x19 mm). Galaxy SmartTags dị na nsụgharị abụọ:
SmartTag ọkọlọtọ na-eji Bluetooth 5.0 Low Energy (LE)
SmartTag + Were ohere nke bandwid-wide (UWD) soro ihe.
N'ihe banyere ime ihe, ha abụọ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Oke kachasị nke mgbama Samsung bụ Ogwe 120, dị ka Tile Pro, mita 20 karịa Apple AirTags.
Iji chọta ihe ejikọtara ya, anyị ga-eji nke Galaxy Find, netwọkụ nke jiri Samsung Samsung niile chọta ọnọdụ nke mgbama ahụ na anyị efunahụ enweghị ndị ọrụ gafere ya, nata ọkwa ọ bụla (otu ọrụ dị ka Apple's AirTag).
Naanị otu mana anyị hụrụ na Galaxy SmartTag, bụ otu ihe ahụ dị ka AirTags: ha na-arụ ọrụ naanị n'ime usoro okike ya. Nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na ịnweghị Samsung smartphone, ịgaghị eche echiche ọzọ.
Pricegwọ nke Samsung Galaxy SmartTag bụ ihe 29,99 euro, ọ bụ ezie na na Amazon anyị nwere ike ịhụ ha na-adọrọ mmasị ego ma ọ bụrụ na anyị zụrụ otu o ọzọ nkeji. Ọ dị na ọcha na agba aja aja.
Ọ bụrụ na n'oge a, naanị ihe ịmasị banyere mgbama ndị a bụ nnweta agba, ị kwesịrị ịtụle nhọrọ Chipolo tinyere anyị na Chipolo ONE. Chipolo ONE nwere a gburugburu imewe na otu onu nke na-enye anyị ohere ịkwanye ya na igodo, akpa, akpa azụ ...
Isi ihe ọzọ dị mkpa nke mgbama ndị a bụ ikike emit ụda 120 db nke ahụ ga-aba ezigbo uru mgbe ị na-achọta ihe furu efu ma ọ bụ na-ekwesịghị ekwesị. Na-etinye a batrị edochi Ọ na-adịru afọ abụọ ma na-eguzogide ọgwụ (IPX5) mana ọ bụghị submersible.
Es dakọtara na Amazon Alexa na Google Assistant, ya mere anyị nwere ike ijikwa ọnọdụ gị site na iji iwu olu. Tụkwasị na nke a, ọ na-enye anyị ohere ịhazi ihe ngosi na mkpanaka ka anyị ghara ịhapụ ihe ahụ ejikọtara ya, ọrụ dị mma maka ihe na-enweghị isi nke dịkwa na mgbama ndị ọzọ anyị na-ekwu maka nke a. isiokwu.
Chipolo beacons dị na Amazon maka 24,90 euros na odo, ọcha, acha anụnụ anụnụ, nwa, ọbara ọbara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nha 38x38x7 mm.
Dị ka Samsung SmartTags, Cube Pro na-etinye bọtịnụ na ngwaọrụ ahụ, bọtịnụ na-enye anyị ohere iji dị ka igwefoto ime akara nke ama anyị. O nwere ọkà okwu nke na-ewepụta ụda nke 101 dB, yabụ na ọ gaghị esiri ike ịchọta ihe ndị anyị tufuru ma chọọ ịgbake.
Batrị na-agbanwe agbanwe na-adịru otu afọ, ọ bụ IP67 na-enweghị mmiri. Mgbe anyị hapụrụ ngwaọrụ nke anyị jikọtara ọkụ a, ngwa a ga-etinye mkpu iji chetara anyị na anyị abanyela n'ọnọdụ ahụ enweghị isi.
Ihe na-adịghị mma nke mgbama ndị a bụ na Ọ nwere nso site na blu Bluetooth nke naanị 60 mita, mgbe ọtụtụ nhọrọ dị na ndepụta a, gafere ogologo ahụ. A na-akwụ ụgwọ mgbama Cubre Pro na $ 29,99 ma ọ bụghị ugbu a na Spain.
Onye nleba anya CUBE
Filo Tag mgbama na-apụ na mbụ mechie imewe, na-enye anyị a akụkụ anọ nhazi na akụkụ nke 21x41x5 cm, nwere nso nke mita 80 na batrị, dochie anya, na-enye anyị nnwere onwe nke ọnwa 12.
N'elu elu, ọ na-etinye ụdị rịbọnụ ahụ na-enye anyị ohere itinye akara ngosi na eriri akpa, akpa azụ, akpaMa na-egosi anyị mgbe anyị si na ngwaọrụ ahụ pụọ.
Ọ na - etinye bọtịnụ mgbe emetụtara ya ugboro abụọ, na - amalite playback na ngwaọrụ mkpanaka anyị, ọbụlagodi na ngwaọrụ ahụ dị jụụ, yabụ na ọ bụ ihe ngosi ọkụ ezigbo maka ndị na-anaghị echetakarị ma ọ bụ na-efu ngwa ngwa na igodo ahụ.
Ihe ngosi Filo Tag locator dị na uhie, ojii, acha anụnụ anụnụ na ọcha na ọnụahịa ya, kwa otu, bụ 29,90 euro. N'adịghị ka ngwaahịa niile a kpọtụrụ aha n'isiokwu a, e mepụtara Filo Tags ma mepụta ya na Italytali.
Iji uru ọrụ niile Filo Tag na-enye anyị ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ maka ụdị ndenye aha ọ bụla na ngwa, anyị nwere ike ibudata ya free site na ndị na-esonụ njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » Top 8 uzo ozo ka AirTags maka gam akporo